Ahoana no fomba hanamboarana rindry tsara?
Amin'izao androntsika izao, ny tompon'ny tranonkala dia voatery miady amin'ny toerana TOP ao amin'ny pejy valin'ny fikarohana raha ohatran'ny fifaninanana dia tena avo. Ho hita eo amin'ireo tranonkala mifandraika amin'ny niche, mila mamorona fampielezan-kevitra mendrika ianao ary hamorona profil-rohy malaza. Hatramin'ny vanim-potoana farany tamin'ny famoaham-bokan'ny Google dia nanjary somary mafy ny hanangana rohy amin'ny tranokalanao. Amin'izao fotoana izao, Google dia manombana tsara ny lanjan'ny rohy tafiditra ao amin'ny Google, raha ny fijerin'ny ankolafin-kafatra avy amin'ny loharanom-baovaon'olon-tsotra. Izany no antony tokony hahafantaran'ireo mpikarakara webmasters rehetra ny toerana hanamboarana rindran-damina mba hahazoana ny fahombiazany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hifanakalo hevitra momba ny teknika mahomby izahay mba hahazoana lozisialy mahavariana tsara sy toe-javatra izay afaka manampy anao hanangana ny isan'ireo rohy mankany anaty.
Backlinks avy amin'ny loharanom-baovao azo antoka
Ny voalohany sy manan-danja indrindra
Ny tanjona izay mamaritra ny kalitaon'ny rohy miditra dia loharano iray avy amin'ny loharano izay ahatongavan'ireny rohy ireny. Ohatra, raha toa ianao ka manana mpanelanelana bitika farafaharatsiny avy amin'ny loharanom-baovaomiera avo lenta, dia hitondra siramamy mifandraika bebe kokoa aminao avy eo ireo rohy maromaro avy amin'ny tranonkala mendrika. Azony hazavaina amin'ny fahatsiarovan 'i Google ny hatsaran'ny votoatiny na ny rohy ateraky ny toerana malaza toy izany. Ankoatra izany, ireo singa roa mpamaritra Google dia mamaritra ny kalitaon'ny loharanom-baovao - Page Authority sy Domain Authority. Raha manana loharanom-baovaon'ny PA sy DA ny loharanon-tranonkala iray, Google dia hamaritra azy bebe kokoa amin'ny SERP, hanomezany fitokisana bebe kokoa. Raha toa ka misy rohy misy ifandraisany amin'ireo tranonkala ireo, dia hitondra siramamy maromaro tsara eo amin'ny tranonkalanao izy ireo. Raha te hanamarina raha ny loharanon-tranonkalan'ny loharanom-baovao na tsia ny rohinao, azonao atao ny manatanteraka ny Semalt Web Analyzer.
Backlinks avy amin'ny pejin'ny PR PR
PageRank (PR) dia natao ho tombam-bidin'ny fanombantombanana ny isam-pizaran'ireo tranonkala rehetra amin'ny fikarohana aseho amin'ny Google. Ireo tranonkala misy laharana ao amin'ny TOP dia farafaharatsiny 9PR ary manana toetra be dia be ho an'ny mpampiasa. Hatramin'ny 2012 PageRank dia tsy dia manan-danja loatra toy ny teo aloha, fa mbola manjohy ihany ho fitsipika ho fanombanana ny kalitaon'ny loharanon-tranonkala sy ny lazany eo imason'ireo mpampiasa sy ny orinasa indostrialy. Amin'ny alàlan'ny default, ny backlinks amin'ny tranonkala 9 na 10PR, toy ny Wikipedia, YouTube, Facebook, sy ny sisa, dia afaka mitondra siramamy mifandraika amin'ny tranokalanao. Na izany aza, tsy mora foana ny mahazo rohy fidirana avy amin'ireny karazana tranonkala ireny. Na dia izany aza dia misy teknikam-pahaizana sasantsasany azonao ampiasaina (azonao vakiana momba azy ireo ao amin'ny lahatsoratra navoakanay taloha hoe "Ahoana ny mahazo ny lisitry ny backlinks Dofollow maimaim-poana?"). Manoro hevitra anao aho fa tsy mandany ny fotoanao amin'ny fiezahana hamorona rohy amin'ireo tranonkala N / A PR na tsia ho an'ny tranokala PR anao ambany. Tsy hahazo valiny mahafa-po avy amin'izany ianao ary hampitombo ny harenan'ny Google eo amin'ny sehatra misy anao.
Backlinks avy amin'ny tranonkala
Raha tsy azonao atao ny manangana ny rohy amin'ny tranokala avoakan'ny PR, mila mamorona azy amin'ny tranokala misy anao miaraka amin'ny votoaty mitovy Lohahevitra. Ohatra, raha momba ny fanatsarana ny fikarohana ny blôginao, ny rohy eo amin'ny blaoginao dia hahita voajanahary. Na dia misy manam-pahefana ambony aza ny blôgy, dia hohamarinina ho toy ny manan-danja sy ny kalitao ny lisitry ny backlinks. Izany no antony, alohan'ny hametrahana ny fifandraisana amin'ny vohikala amin'ny tranonkala hafa na blôgy, dia ataovy izay hahazoana antoka fa farafaharatsiny kely ny orinasanao Source .